कुलमान घिसिङ भन्नुहुन्छ : उपत्यकामा ७० मेगावाट माग घटेको छ, बिजुली गइरहनु व्यवस्थापनको क’मजोरी हो…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
पुष १९, २०७७ आइतबार 4
काठमाडौ : कुलमा’न घिसिङ भदौ २८ ग’तदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सेवा’निवृत्त हुने’बित्तिकै आम उपभोक्ताहरुले अब फेरि लोडसेडिङ हुने हो कि भनेर निकै चि’न्ता व्य’क्त गरेका थिए ।
अहिले राजधानीमा बिजुली आ’उने जाने क्रम बढेर उप’भोक्तालाई हैरानी भएको छ ।सर्वसाधारण उपभोक्तामा अ’हिले एउटा श’ङ्का देखि’एको छ ।कतै निश्चित स्वार्थ समू’हको चल’खेलबाट लो’डसेडिङ गराएर पुरानै अन्धकार युगमा मुलुकलाई फर्काउने कस’रत भइरहेको त हैन ?
आम उपभोक्ताहरुले सामा’जिक सञ्जालमा फेरी लोडसेडिङ हुने भनेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यसबारेमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घि’सिङबाट वा’स्तविकता बुझने प्रया’स गरेका छौं। क्या’पिटल नेपा’लसंग कु’रा गर्दै उनले प्रा’धिक’रणको व्यवस्थापकीय कमजोरीले बिजुली गइरहेको बताए ।
प्राविधिक समस्या आएपछि सम’यमा रि’स्पोन्स गर्नु’पर्छ, त्यो भएको देखिएन । त्यसैले बिजुली आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो’ उनले भने ।गत वर्षको भन्दा यो वर्ष उपत्यकामा बि’जुलीको मा’ग ७० मेगावाट कम भएको कुलमानले जानकारी दिए ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष उपत्यकामा सबैभन्दा उच्च माग ४०७ मेगावाट थियो । यसपालि कोरोना भाइरस महा’मारीका का’रण अझै थुप्रै उद्योगधन्दा तथा होटलहरू पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन्। त्यसैले बिजुलीको माग पनि घटेको उनको भनाई छ ।
माग नै कम भएको अवस्थामा लोडसेडिङ भएको हैन, प्राविधिक समस्या समयमा समधान गर्न नसकेको हो’उनले भने ‘प्रणालीकोे व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ । नि’यतवश लो’डसेडिङ गराउने योजना नभइ व्यवस्थापकीय कम’जोरीले यस्तो समस्या आएको हो । ’
Prevप्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ : कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याएर छाड्छु…हेर्नुहोस ।
Nextनेतृ झाक्री भन्नुहुन्छ : ओलीले भ्रष्ट्रचारीको संरक्षण गरेको सत्य हो, जतिसुकै निन्दा गरे पनि पुग्दैन…हेर्नुहोस् ।
प्रदेश नं १ मा धान उत्पादन सोचेभन्दा राम्रो…हेर्नुहोस् ।
हार्दिक बधाई ! अर्काको घरमा भाडा माझ्ने आमा,छोराले जिते ‘इन्डियन बेस्ट डान्सर’ को ट्रफी ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1368)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1368)